« Pejy vaovao » -
AccueilTresaka« Pejy vaovao »
« Pejy vaovao »
29/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Tao anatin’izay 58 taona nahazoana ny fahaleovantena izay dia tsy nisy tamin’ireo Filoham-pirenena nitondra an’i Madagsikara sahy nanangana an’izany « Haute Cours de Justice » izany afa-tsy ny Filoham-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarimampianina. Io Fitsarana Avo io ihany mantsy no afaka mitsara ny Filoham-pirenena, Filoham-panjakana sy tompon’andraikitra ambony manoloana ny heloka samihafa nataony , ka nataon’ireo mpitondra tamin’izany mihitsy izay tsy hitsanganany. Pejy vaovao araka izany no misokatra eto Madagasikara. Pejy vaovao izay mampijanona ny kolontsaina tsimatimanota. Vita hatreo ny fiheveran’ny Filoha teo aloha sasany ho tsimatimanota. Hitsangana ato ho ato tokoa mantsy ny HCJ, ary efa vonona avokoa ireo mpikambana rehetra handrafitra azy.
Ny fanirian’ny Malagasy 25 tapitrisa ihany koa, dia ny mba hitsarana ireny Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana nampahantra ny firenena, namono olona noho ny fitiavam-pahefana, nitarika olona tsy manan-tsiny hatao sorona noho ny fakana fahefana eny an-dalambe. Satria tokoa, dia toy ny vitavita ho azy ny fahotana mahafaty nataon’izy ireny, ka mikasa hanao sorona ny aim-bahoaka isaka ny 4 taona na isaka ny 8 taona ry zareo aty aoriana.
Fanontaniana mipetraka ny hoe iza no hotsarain’ny HCJ voalohany? Lava dia lava ny lisitr’ireo tokony hotsarain’io fitsarana avo io voalohany, saingy ny tsy azo lavina aloha dia ny Filoham-panjakana voarohirohy tamin’ny fanonganam-panjakana ka nitarika fahafatesan’olona toa an-dRajoelina sy Ravalomanana.
Efa namoahan’ny fitsarana ambaratonga voalohany didy mampigadra azy mandra-pahafaty mantsy Ravalomanana Marc tamin’io raharaha io, saingy nolaviny izany satria ny HCJ hoy izy no mahefa sy afaka mitsara azy. Tonga ity ilay nandrasan’izy ireo, ka tsy misy hirika azo ialana bala amin’izany intsony.
Tsy afa-miala amin’izany koa i Andry Rajoelina. Nahay nanadio tena hatrany mantsy izy ka nipetraka ho “victime” indray, kanefa raha tsy nisy azy tsy ho voatifitra teny Ambohitsorohitra mihitsy ireny olona namoy ny ainy tamin’ny raharaha 7 febroary 2009 ireny. Mbola raharaha miandry an-dRajoelina, ary andrasan’ny maro didim-pitsarana koa ny raharaha 26 janoary 2009 na “alatsinainy mainty”. Ain’olona firy no nafoy tamin’io raharaha io, ary orinasa ana vahiny sy teratany malagasy firy no mbola tsy nahazo onitra vokatry ny fandrobana nataon’ireo mpanongam-panjakana. Etsy ankilan’izay koa dia mety hijoro ho mpitory an-dRajoelina ny vahoaka malagasy tamin’ny fandorany ny RNM sy ny TVM. Tahirim-bakoka mirakitra ny maha izy azy ny Malagasy sy ny kolontsaina Malagasy no kilan’ny afo tamin’izany, ka na hatramin’izao aza mbola tsy tafarina.
Maika ery ireo depioten’ny fanovana sy ny mpanohitra mitaky ny fitsanganan’io HCJ io, kanefa dia ny mpitarika azy mihitsy no hotsaraina voalohany. Tena pejy vaovao ho an’ny tantaran’ny Malagasy mihitsy no hosoratana manomboka eto.